Amaqabane eSelo Group kunye noKhef Meyrick owaziwayo ukuphucula amava okupheka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Amaqabane eSelo Group kunye noKhef Meyrick owaziwayo ukuphucula amava okupheka
Culinary • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Amaqabane eSelo Group kunye noChef Will Meyrick
Iqela iSelo, eliphumeleleyo neliphumelele ngokupheleleyo kwinkampani yophuhliso eseSingapore, namhlanje ibhengeze umpheki owaziwayo kwilizwe liphela kunye nendawo yokutyela eyaziwayo uWill Meyrick njengeqabane lakhe elitsha kraca.
Umpheki uza kuphuhlisa amava amatsha okupheka kwiiprojekthi zezindlu zikaSelo.
UMeyrick uye waligama eIndonesia eneendawo zokutyela ezisixhenxe eziphumeleleyo phantsi kwebhanti lakhe.
ISelong Selo Resort & Residences, evulelwe kunxweme oluhle lwaseSouth Lombok eIndonesia ngo2016, izakuba yeyokuqala ukubona indalo kaMeyrick.
UMeyrick uya kuzisa ubutyebi bakhe bobungcali ukuphuhlisa amava amatsha okupheka kunye nokongamela inkqubo yokutya kunye nesiselo kwiiprojekthi zezindlu zikaSelo, kubandakanya nepropati yayo ephumeleleyo Selong Selo Resort & Iindawo zokuhlala eLombok, eIndonesia.
"Ngaba uqhelene kakhulu nemarike yaseIndonesia kwaye ubengusomashishini ophumeleleyo iminyaka engaphezulu kwama-25 njengomnini weendawo zokutyela ezininzi eBali, ke yena ungumgqatswa ofanelekileyo wokukhokela iinzame zokupheka zeeprojekthi zethu," utshilo u-Andrew Corkery, Iqela leSeloCEO. "Siyazi ukuba iindwendwe zethu ziyakonwabela ubuchule bakhe, ulwazi olubanzi kunye nomdla ocacileyo wokuhamba kunye nokunxibelelana ngokutya."
Uvulindlela kummandla wokutya, uMeyrick uzakhele igama ngokutyhala imida. Umsebenzi wakhe wamkhokelela ukusuka eLondon ukuya eSydney kwaye ekugqibeleni waya kwi-Southeast Asia, apho ahlala khona ngoku. Emva kokusebenza kwiivenkile ezimbini eziphambili eSydney, uMeyrick waya eIndonesia, Thailand naseHong Kong ngamathuba amatsha kwaye wathandana nesiqithi esincinci saseBali, apho waseka khona ubukhosi bakhe bokutya, iSarong Group.
Ube ligama lasekhaya eIndonesia eneendawo zokutyela ezisixhenxe eziphumeleleyo phantsi kwebhanti lakhe, kubandakanya ukuphumelela amabhaso uSarong, uMama San, uHujan Locale e-Ubud, uBilly Ho Izakaya waseJapan eCanggu, kunye neMonsoon e-Central, Hong Kong. Ukongeza kwipotifoliyo yakhe yokutyela kunye neencwadi zokupheka, uMeyrick unokubonwa kwindima eqhubekayo kwiinkqubo zikazwelonke nakwamanye amazwe ezinje nge-Chef franchise yaseIndonesia kunye nokubuyela kwiiRetriki kwiChannel yokuTya yaseAsia, kunye nochungechunge lweYouTube kunye neDiscovery Channel.
ISelong Selo Resort & Residences, evulelwe kunxweme oluhle lwaseSouth Lombok eIndonesia ngo2016, izakuba yeyokuqala ukubona indalo kaMeyrick. Ipropathi iyi-25 yemizuzu yokuqhuba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Lombok kwaye inikezela ngaphezulu kwe-villas ezingama-50 igumbi lokulala elinye ukuya kwasixhenxe, indawo yokusebenzela epheleleyo, indlu yeklabhu, iAura Bar kunye neLounge, iklabhu yabantwana kunye nokufikelela kwiklabhu yaselwandle. Kufuphi nendawo yokuphumla kukho ii-villas ezikhethekileyo ze-surf ezikhethiweyo ezingama-20 ezifumanekayo ezithengiswayo kwisitudiyo, enye okanye ezimbini zokulala ezinokungena echibini labucala.
Ngolwazi oluthe kratya kwiQela leSelo kunye neeprojekthi zalo, nceda undwendwele www.sadisco.co
Malunga neqela leSelo
Iqela iSelo linerekhodi eqinisekisiweyo yomgangatho wokwakha, iindawo zokuphumla eziwongwa ngebhaso kunye neendawo zokuhlala abantu ngexesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali, ukuya kwimigangatho ephezulu yamazwe aphesheya. Imodeli yeshishini yakhelwe malunga nokufumana, ukukhula, kunye nokusebenza. Iqela elinamava leenkampani kwilizwe liphela liyongamela uyilo, ukuthengiswa kwepropathi kunye nentengiso, ulwakhiwo, kunye nokusebenza kwehotele kunye nendawo yokubhenela. Iqela iSelo libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zophuhliso, ulwakhiwo, ukusebenza, kunye neenkonzo zolawulo, ukongamela iiprojekthi ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni ngokuzimisela okunamandla kuzinzo. Ngokudibanisa ngokuthe nkqo, iqela libamba ukusebenza kakuhle kuyilo, ukuthengisa kunye nokwakha ngokuthe nkqo kwiindawo zokungcebeleka ezisebenzayo. Itekhnoloji kaSelo eluhlaza kunye noyilo lubonisa ukuzibophelela kwimigaqo yozinzo kwiindlela zalo zokwakha, ukusebenza ngaphakathi, kunye nokuzibandakanya noluntu lwasekhaya kunye nendalo esingqongileyo.